Ikwu okwu na ige nti
Na Wentworth anyị kwenyere na ikwu okwu & ịge ntị bụ nka nka nke ndụ. Bekee na -etolite ike ụmụaka ige ntị na ikwu okwu, maka ọtụtụ ebumnuche na ndị na -ege ntị. A na -agba ụmụaka ume ka ha jiri aka ha gosipụta onwe ha ka ha na -emikpu n'ime ụwa na -eche echiche nke akụkọ, uri na ihe nkiri. Ha na-enwe ike ikwupụta echiche ha gbasara ọtụtụ ihe mere eme nke dị ha mkpa n'ofe usoro ọmụmụ.
Ụmụ akwụkwọ ga-enwe ohere iji ma ikwu okwu na ịge ntị maka ọtụtụ ebumnuche gụnyere:-
Na -enyocha, na -emepe ma na -akọwa echiche
Eji ọnụ na -ede ma na -amụgharị ahịrịokwu tupu ede
Ime atụmatụ, ibu amụma na nyocha
Ịkekọrịta echiche, nghọta na echiche
Ịgụpụta olu, ịkọ na imepụta akụkọ na abụ, ọrụ
Ịkọ na ịkọwa ihe omume na nleba anya
Na -ewetara ndị na -ege ntị, ndụ ma ọ bụ ndekọ
Ịhazi na idozi nsogbu n'ofe usoro ọmụmụ
Mkparịta ụka gbasara abụ, akụkọ, ejije, mmemme TV, ihe mere eme n'ezie, ihe akụkọ, ihe ndị mere ugbu a wdg.
Ịbawanye iwu ụmụaka nke Standard English
Na -ege ntị nke ọma, iji mata isi ihe nke ihe ha nụrụ
Ịjụ ajụjụ ka ọ gbasawanye ihe ọmụma na nghọta ha
N'ime EYFS niile, Nkeji nke Mbụ na Nkeji nke Abụọ 2, a na -enye ụmụaka ohere ikwupụta echiche ha n'okwu, ịkọwa echiche nke ha, ime atụmatụ na isonye na mkparịta ụka. N'akụkụ nke a, ha na -amụta ịge ndị ọzọ ntị na itinye uche n'ihe ha nụrụ. Mụta mgbakọ nke mkparịta ụka, ịtụgharị, inye ndị ọzọ ohere ikwu okwu, ịzaghachi ihe ekwuru nke ọma ma jiri echiche ndị ọzọ kpọrọ ihe.
A na -agba ụmụaka ume ka ha na -ekwu okwu n'ụdị ọnọdụ dị iche iche, ka ha na -etolite, na -emegharị ụzọ okwu ha nke ọma.
Ojiji ụmụaka na nghọta asụsụ asụsụ na -emetụta usoro ọmụmụ niile. A na -eji usoro nkuzi mmekọrịta eme ihe iji tinye ụmụ akwụkwọ niile ka ha wee bulie ụkpụrụ ịgụ na ide ihe. A na -agba ụmụaka ume ịzụlite nkà nkwurịta okwu dị irè n'ịdị njikere maka ndụ ọzọ.
Ihe ndị m na -eme iji kwalite ikwu okwu na ige ntị
• mpaghara egwuregwu (EYFS na KS1)
• mpaghara egwuregwu (ọrụ)
• ịgụ na mgbakọ na mwepụ egwuregwu
• ịkekọrịta ihe ederede ederede, atlases, wdg.
• mmekọrịta mmekọrịta
• egwuregwu ụmụaka butere na EYFS
Ihe arụpụtara nke ọma iji kwalite ikwu okwu na ige ntị
• lekwasịrị anya na mmemme na EYFS
• eme ihe nkiri
• oge okirikiri
• gosi ma kekọrịta/gwa oge
• okwu ọnụ (asụpe)
• ọgụgụ ihe ekerịtara na ntuzi aka
• na -agwa ma ọ bụ na -agụ akụkọ akụkọ na klaasị
• arụmụka klaasị
• okwu na arụmụka na -ekwenye ekwenye/mkparịta ụka
• kpọọ edemede
• ihe mmemme ụlọ akwụkwọ na mgbakọ
• Na -ekwu maka ọrụ ide ihe
A na -ewepụta ọtụtụ n'ime mmemme ndị a dịka nkuzi Bekee. Agbanyeghị, a na -enye ohere ndị ọzọ kwa ụbọchị iji gbaa ume na ịkwado ikwu okwu na ịge ntị.
Mpempe akwụkwọ ozi na ikwu okwu